Uhlabane ngendondo eNairobi uZaza Mokhethi
UMCULI wokholo ezimhambela kahle izinto zakhe uZaza Mokheti othole indondo eKenya
BONGIWE ZUMA | May 13, 2019
UKHALE wemuka nenye yezindondo zomcimbi omkhulu wezindondo zowokholo eNairobi umculi wowokholo wakuleli osanda kukhipha i-albhamu entsha.
UZaza Mokhethi weZahza Holdings uhlomule ngendondo kumaMaranatha Worship Music Awards ngempelasonto ngaphansi komunxa weFemale Excellence ebeqokwe ngaphansi kwawo.
Lo mculi ophesheya kwezilwandle eLondon okwamanje uthe ubonga amandla kaNkulunkulu ngale ndondo. " Ngiyabonga Nkosi ngale ndodo, ngiyakubonga," kusho uZaza kwikhasi la-Instagram lakhe.
UZaza uthola le ndondo nje umatasa nokwenza umjikelezo wokwethula i-albhamu yakhe emadolobheni ahlukene eLondon. Le albhamu ethi Imbewu The Outpouring Chronicle selokhu eyikhiphile uZaza ikhombisa ukuhamba kahle njengoba nabantu abaningi behlala beyitusa ezinkundleni zokuxhumana. Ingoma ethi Imbewu iyona ehamba phambili kakhulu kule albhamu.
UZaza ngenyanga edlule watshela Isolezwe ukuthi le ngoma isondele kakhulu enhliziyweni yakhe ngoba imkhumbuza umkhulu wakhe. UZaza kule albhamu usebenzi babaculi abaningi bokholo abathandwayo okubalwa uDumi Mkokstad, Swazi Dlamini nabanye.
Wakuveza nokuthi uyakholelwa ekusebenzisaneni nabanye abaculi nokumenza angakhohlwa lapho ephuma khona kwiqembu leJoyous Celebration kanjalo neSpirit of Praise esiholwa uPastor Benjamin Dube. Imbewu The Outpouring Chronicle seyinane DVD ayiqophile uZaza ekutholakala kuyo nezinye zezingoma zakhe ezithandwayo.